पाकिस्तान क्रिकेटका लागि सुखद खबर ! बंगलादेशले पाकिस्तानमा टी–२०, टेस्ट र वान डे म्याचको सिरिज खेल्ने - News20 Media
January 16, 2020 N20LeaveaComment on पाकिस्तान क्रिकेटका लागि सुखद खबर ! बंगलादेशले पाकिस्तानमा टी–२०, टेस्ट र वान डे म्याचको सिरिज खेल्ने
काठमाडौं । पाकिस्तान क्रिकेटका लागि मंगलबार सुखद् खबर रह्यो । बंगलादेश क्रिकेट बोर्डले पाकिस्तानमा टेस्ट सिरिज खेल्नका लागि सकारात्मक जवाफ दिएको छ । जनवरीदेखि अप्रिलसम्म बंगलादेशको टिमले पाकिस्तानमा टी–२०, टेस्ट र वान डे म्याचको सिरिज खेल्नका लागि उसले स्वीकार गरेको हो । दुई देशबीच हुने यी सिरिज सम्भव बनाउन इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिलका अध्यक्ष शशंका मनोहरको भूमिका रहेको छ ।
मनोहर भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्डका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । लामो पखाइपछि अन्ततः पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले बंगलादेशलाई टेस्ट सिरिज खेलाउन सहमति गराएको हो । मंगलबार दुवै देशका क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्डको बैठक दुबईमा भएको थियो । सो बैठककमा शंशाक पनि उपस्थित रहेको एजेन्सीले बताएका छन् । पीसीबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पाकिस्तानले अब म्याच सफलतापूर्वक आयोजनाको तयारी गर्ने उल्लेख छ ।
बंगलादेशको टिमले पाकिस्तानसँग तीन टी–२०, दुई टेस्ट र एक वान डे म्याच खेल्ने छ । यी स्पर्धा तीन फरकफरक महिनामा खेल्ने प्रस्ताव रहेको छ । जनवरीदेखि अप्रिलसम्म प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ । लाहोरमा २४ देखि २७ जनवरीका बीच तीन टी–२० स्पर्धा हुने भएको छ । फ्रेबवरीमा बंगलादेशको टिम पाकिस्तान भ्रमणमा जाने छ । ७ देखि ११ फ्रेबवरीबीच पहिलो टेस्ट खेलिनेछ । ३ अफ्रिकामा दुई देशबीच अर्काे वान डे म्याच हुनेछ । ५ देखि ९ अप्रिलको बीच पाकिस्तानसँग बंगलादेशले कराँचीमा दोस्रो टेस्ट खेल्नेछ ।